Yakagadzirwa kubva kuCPLA mapurasitiki, bioplastic yakatorwa muchibage, izvi zvinoshandiswa zvinoshandiswa 100% zvinogadzirwa zvine hunyanzvi, zvinoshanda senzira yakanaka kwazvo ye eco-hushamwari kune midziyo yepurasitiki. Iine hunyanzvi, hwakaumbwa nekristaro iyo inogona kuramba kupisa kusvika ku100 ° C, aya epurasitiki ekucheka maseti akakwana kuti ubatanidzwe neinotonhora kana inodziya madhishi kuresitoreti yako isina-kutsanya, yekudyira, kana dhishi. Ichionekera neyakaenzana nzvimbo, idzi midziyo yeCPLA zvisina basa inozadza kushongedza pane chero chikafu chinogadzirwa.
Somunhu nyanzvi mugadziri kuti chete-kushandiswa kunwa mikombe uye chikafu mugaba kwemakore anopfuura gumi nematatu, isu tine hukuru hwakasiyana Pla mugove makapu, Pla ice cream makapu, PLA yekunwa makapu, U mhando PLA makapu, dhiri mukombe / mudziyo, PLA mbiya uye lids kwavari vese. Yedu PLA inotonhora makapu inotsiviwa yakakwana yechinyakare makapu epurasitiki sezvo makapu edu ari 100% compostable uye biodegradable. Izvo zvinhu zvatinoshandisa inhengo yemhuri yepolyester, uye chinhu chepakutanga chakakwana uye chinogonazve kuchengetwa mukati megorosi
Somunhu nyanzvi mugadziri kuti chete-kushandiswa kunwa mikombe uye chikafu mugaba kwemakore anopfuura gumi nematatu, isu tine hukuru hwakasiyana Pla mugove makapu, Pla ice cream makapu, PLA yekunwa makapu, U mhando PLA makapu, dhiri mukombe / mudziyo, PLA mbiya uye lids kwavari vese.
100% Inogadzirisika uye inogadziriswa imbwa mabhegi emabhegi chinhu chinofanirwa-kuve nechinhu kune vese vadikani vechipfuwo. Icho chidiki uye chakasununguka kubata, saka unogona kutora icho kana iwe uchifamba imbwa yako. Iyo haidonhe uye ine yakasimba tensile simba, saka iwe unogona kutarisira zvese zvinodikanwa zvembwa yako uye uchisiya guta rako rakachena uye rinofadza kumeso ako. Chengetedza imbwa yako kufara uye guta rako rakachena needu imbwa tsvina tsvina.
Iyi firimu yakagadzirwa nePLA, iyo isiri-chepfu kuvanhu uye nharaunda. Iyo inodzikisira zvachose mumvura uye kabhoni dhayokisa pasi pemamiriro anogadzikana mumwedzi mitanhatu, saka chinyorwa ichi chine hushamwari uye chinokubatsira iwe kuchengetedza nharaunda uye kuderedza kusvibiswa. Iyo ine kuomarara kwakanaka, yakasimba kutakura-kutakura, kuiswa chisimbiso kwakasimba, hapana leakage uye breakpoint mhando.